ကဗျာချစ်သူ များ ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ကဗျာချစ်သူ များ ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၃)
ကဗျာချစ်သူ များ ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၃)
ပြခန်း (၁) http://myanmargazette.net/176843
ကဗျာ ပြခန်းအမှတ် နှစ်
၃ ဇွန် ၁၃
ကေဇီ – ဟင်း:::::::::
သဂျား – ဂျီးဒေါ် ဘာဖြစ်နေတာတုန်း။
ကေဇီ – စိတ်ပူနေတာလေ။
သဂျား – ဘာကိုတုန်း။
ကေဇီ – ပြခန်းကိစ္စပေါ့ဟ။
သဂျား – သိပ်စိတ်ပူမနေပါနဲ့ဗျာ။ အလက်ဆင်း နိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ ဖွင့်နိုင်မှာပါ။
ဤကား အလက်ဆင်းတစ်ယောက် ပြခန်း (၂) အတွက် သွားစီစဉ်နေချိန်တွေ ကေဇီနဲ့ သဂျားတို့ ပြောဆိုနေရခြင်းဖြစ်၏။
ကေဇီ – ဟမ်။ အလက်ဆင်းအတွက် စိတ်ပူတယ်လို့ ဘယ်သူပြောတုန်း။ မပူပါဘူး။ ကျုပ် အတွက် ကျုပ် စိတ်ပူနေတာ။
သဂျား – ဖစ်ရလေ ဂျီးဒေါ်ရယ်။
ကေဇီ – ဟုတ်တယ် လေ။ နင်တို့၂ ယောက်က ပြခန်း (၁) နဲ့ (၂) ကို စိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်း ကောင်းဖန်တီးသွားနိုင်တော့ ကျုပ် ရေးရမဲ့ ပြခန်း (၃) အတွက် စိတ်ပူတာပေါ့လို့။ အင့် အင့် (ရှိုက်သံ ခရက်ဒစ်တူ ကိုကမ်း)။
အလက်ဆင်း – ဟင်။ မမခိုင် ဘာလို့ ငို တုန်း၊ သဂျား နင် သွား ဆူ ထားပြန်ပြီလား။
သဂျား – ဟာ။ မဆူပါဘူး။ သူ့ဟာသူ ဂေါက်ပြီး ငိုချင်နေတာရယ်။ ကဲ၊ ခု သိပြီမဟုတ်လား ဂျီးဒေါ်။ ကျနော် ပထမဆုံး ပြခန်း အတွက် မအိပ်နိုင် မစားနိုင်ဖြစ်ခဲ့တာကို။
ကေဇီ – သိပါပြီကွယ်။ ခုလည်း ကျုပ် မအိပ်နိုင်မစားနိုင်နဲ့ အရမ်းများ ပိန်သွားသလားမသိဘူး။ မဖြစ်ဘူး။ ခုချိန်က စ ပြီး ပြခန်း (၃) အတွက် ကြိုးစားရမယ်။
အလက်ဆင်း – ကြိုးစားမယ် ပြောတာ အနော့ အမှတ် (၂) မစခင်ကတည်းက မဟုတ်ဘူးလား။ ဟို ကဗျာ လာလု လိုက် ဒီ ကဗျာ လာ ဓားမြတိုက်လိုက်နဲ့။
ကေဇီ – အွန်။ အဲ ။ ဟီးဟီး။ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ အသက်ကြီးတဲ့ ငါလေး တစ်ယောက်တည်းဟာကို။ အလိုလိုက်ကြပါ။ ဒါနဲ့ အလက်ဆင်းရဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို စာရင်းထဲ ထည့်ထားလိုက်ပြီနော်။ (၁) ပုဒ်ပဲ ရသေးတယ်။ အင်း:::: ရှေး ကဗျာ နဲ့ ဆိုမှ (၂) ပုဒ် ပေါ့။ ကျုပ်က ကျုပ်ရေးတဲ့ ပို့(စ) မှာ ကဗျာ ရော ဓာတ်ပုံရော စိတ်ကြိုက်ရွေးချင်တာ။
သဂျား+ အလင်းဆက် – (ခါချဉ်ကောင်မာန်ကြီးနေပြန်ပြီ။ ပြီးရင် အလုပ်များလို့ဆိုပြီးအရပ် ကယ်ပါ လူဝိုင်းပါ နဲ့။ ပထမဆုံး ပြခန်းကတည်းက ခံရတာ အံတိုနေပြီ။)
ကေဇီ – ဘာ! နေကြပေါ့။ ကြည့်ထား။ ကဗျာရော၊ ဓာတ်ပုံရော နင် တို့ အပြောမခံရအောင် တစ်ယောက်တည်း လုပ်မဟဲ့။
ဤသို့ ကျိန်းဝါးပြီး သကာလ ကေဇီ တစ်ယောက် ကဗျာ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရပြီပေါ့။ ။ လက်ထဲမှာက အလင်းဆက် ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ ရှိသေးတာ၊။ ဓာတ်ပုံ စပယ်ရှယ် ရှာပြီး တွဲပေးမယ် လို့ မက်လုံးပေးပြီး သူ့ ပြခန်း (၂) မှ ချန်ခိုင်းထားသော ကဗျာတစ်ပုဒ် ပေါ့။ ဟိဟိ…
ကိုယ်တိုင်က နည်းပညာရော အနုပညာပါ အားနည်းသော်လည်း မည်သို့ မည်ပုံရောက်လာမိသည်မသိသော အလက်ဆင်းတို့ရဲ့ “”ကဗျာချစ်သူများ”” ရုံးခန်းတွင်း မှာ ထိုင်ပြီး ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားရတော့တာပေါ့လေ။
ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရတဲ့ ဒီ ပြခန်း အတွက်နောက် နောက်ခေါက်ပြခန်းတွေမှာ ကဗျာ ပေးဖို့ မသေချာသောသူများဆီက ဓားမြတိုက်ဖို့ စိတ်ကူး အရင်ရ ပါတယ်။
“ဟဲ့ ရှူး ရှူး။ ဒီ ကြောင် ဖက်တီးဟာ ငါ့ ငါးခြောက်ပြား ဆွဲသွားပြန်ပြီ”
ကြားလိုက်ရသော ဘေးအိမ်မှ ထို အသံကြောင့် အကြံတစ်ချက်လင်းလက်….!!!!
ဟုတ်ပြီ။ ကိုဂျီး ဖက်ကက် ဆီ ဖုန်းခေါ်ရမယ်။
တစ်ဆက်တည်း သတိရသွားတာ ကိုဂျီး အမတ်မင်း …
ဒီ ၂ ယောက် ကို အရင် အနိုင်ကျင့်ရမယ်။ ဟေးဟေးဟေး။
ဖက်ကက် – ဟယ်လို
ကေဇီ – ကိုဖက် ကဗျာ တစ်ပုဒ် ပေး။
ဖက်ကက် – ဟဲ့ ပလုတ်တုတ်၊ ခုပြောနေတာ ဘယ်သူတုန်း။
ကေဇီ – အယ်၊ ဟုတ်သား၊ ကိုဖက် … အနော် ပါ … ကေဇီ ရယ်။ ကဗျာပေးပါ (ဤသို့ လိုရာ ဇွတ်တောင်းရ၏)
ဖက်ကက် – ဘာကဗျာ လို ချင်တာတုန်း။ အချစ်လား.. ဘဝ လား… ဒသန လား။
ကေဇီ – (အလဲ့) ဘာဖြစ်ဖြစ် ခု ခံစားနေရတာကို ရေးထားတဲ့ ကဗျာ ပေးဗျာ။
ဖက်ကက် – ဟယ်! အခု လောလောဆယ် အချစ်လည်း မရှိ ဘဝလည်း မရှိ ဘာကိုမှ မခံစားနိုင်ဘူး။
ကေဇီ – အင်း။ အဲဒီလို ဘာမှ မခံစားနိုင်တာကို ကဗျာရေးပါ။ ဒါပဲ။
ဖက်ကက် – အန်။ အေးပါ။ ပို့လိုက်မယ်။
ကေဇီ – ကိုဂျီးမတ်ရှိရင် ဖုန်းပေးလိုက်။
အမတ်မင်း – ပြော။ ဒေါ်ဆွိ။
ကေဇီ – ကိုဂျီးမတ် ကဗျာပေးပါ။
အမတ်မင်း – ဟင်၊ ပြခန်းက ဘယ်တော့တုန်းရယ်။
ကေဇီ – ၁ရ ရက်နေ့မှပါ။ ဒါမဲ့ ကြိုပေးကြပါ။
အမတ်မင်း – အေးပါ။ ဖြည်းဖြည်းပေါ့။
ကေဇီ – ဘာမှ နှေးနှေးကွေးကွေးလုပ်မနေနဲ့။ လူပျိုကြီးဖြစ်သွားမယ် (အဲလေ ဟုတ်ပေါင်၊ ကဗျာမပေးပဲနေလိမ့်မယ်) ဟိုဟာ။ ပြခန်းမမှီပဲ နေမယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဟီး။
အမတ်မင်း – အင်း။ ပေးမယ်။ ပေးမယ်။
ဟိ။ ဒီ လူဂျီး ၂ ယောက်တော့ နားပူပြီးပြီ။
ထို အချိန်တွင် သဂျားမှ “ဂျီးဒေါ်၊ ဖားသားကြော် နဲ့ ထမင်း စားမလား” ဟု လာခေါ်ရာမှ ……
ကေဇီ – “ဟာ။ ဟုတ်ပြီ။ ဟုတ်ပြီ”
သဂျား – စားဖို့များဆို ဝမ်းသာအားရပဲ။
ကေဇီ – ဟာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟို ဖားသက်ပြင်း ဆီ ကို ဖုန်းခေါ်ပေးပါ သဂျားရေ။
ဖားသက်ပြင်း – ဘာဒုန်း မဇာယိ။ ဒမာ ရန်နီ ကြည့်နေတယ်၊ မနှောက်ရှက်နဲ့။
ကေဇီ – (ဟမ်၊ လာကတည်းက……။ သည်းခံ၊ သည်းခံ) ဟဲ့။ နိ ကဗျာ တစ်ပုဒ် လိုချင်တယ်။
ဖားသက်ပြင်း – သများ ကဗျာ ရေးတတ်ဘု။ ကဗျောင်ပဲ ရေးတတ်တယ်။
ကေဇီ – သိတယ်။ ဒါမဲ့ ရသစုံအောင် တောင်းရတာ။ ဟို ကဗျာ ယူလိုက်မယ်။
ဖားသက်ပြင်း – အင်း! ယူလိုက်။ ဒါပဲ။
ကေဇီ – ဒါမဲ့ ….. အဲ့ ဒီ က ဗျာ ကြီးက………………….။
ဖားသက်ပြင်း – ဘာဖြစ်တုန်း၊ အဲဒါလည်း ရသမဟုတ်ဘူးလား။ ရသစုံချင်တယ်ဆို……။ ပြောစမ်းဘာ…….။
ကေဇီ – (ဟိုက်။ ဆက်ပြောရင် အဆူခံရဦးမယ်) အေး။ ပြီးရော၊ အဲဒါ လှမ်းပြောတာ။ ဒါပဲ။
ပြီးတော့ သူတို့မသိအောင် ပိတ်သတ်ကြီးကို တိုးတိုးလေးပြောဦးမှ။
ဟိ။ ဆရာ ထက်ဝေးကဗျာတစ်ပုဒ် .. ဟို ကလေး ၂ ယောက် မသိအောင် ခိုးထားတာ ရှိတယ်။
နောက် နှိပ်စက် စရာ ပစ်မှတ် က …….. အံစာတုံး
ကေဇီ – အံစာရေ၊ အမ, နင့် ဆီမှာ ရှိတဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ် နင်မသိအောင် ယူထားလိုက်ပြီ။ အဲဒါ ပြခန်း အတွက် ပေးသုံးပါ။
အံစာ – ဟိုက်၊ မြန်ချက်။ ဘယ်တုန်းကဟင်၊ ဘယ် ကဗျာတုန်း ဟင်။
ကေဇီ – မပြောဘူး။ ပြခန်းမှ ကြည့်တော့။ ခွင့်မတောင်းရင် မကောင်းလို့ တောင်းရတာ၊ ဒါပဲ။
အံစာ က နားအေးပြီး ရော သဘောထားသူပီပီ ……
အံစာ – အိုစကေ ပါ။ ဒို့မဂျီး စိတ်ချမ်းသာ ပြီး:::: ရော။
အင်း:::: ဘယ်သူ့ ကို တောင်းရဦးမတုန်း ဆိုတော့….. လုံမလေး
ကေဇီ – မွန်မွန် ရေ။ အမအတွက် ချန်ထားခိုင်းတဲ့ ကဗျာလေးပေးတော့လေ။
မွန်မွန် – ဟုတ် အမ။ အလင်းဆက်က မေးနေသေးတယ်။ သူ့ကို ပေးမဲ့ ကဗျာရောတဲ့။
ကေဇီ – တခြားကဗျာပေးလိုက်နော်။ ဒါလေးကိုတော့ အမ ပြခန်း အတွက်ပေးလိုက်။ သူ့ကို ကြည့်ကောင်းအောင် ပြောလိုက်နော်။ ခွိခွိ။
မွန်မွန် – ဟုတ်ကဲ့ အမ။
တွေ့လား၊ ညီမလေးက အဲလို လိမ္မာတာ။
ကေဇီ – ကြည်၊ ပြခန်း အတွက် အကောင်းဆုံး ကဗျာ ရရင် လိုချင်တယ်။
ရွှေကြည် – ဟိုက်။ ငါ့ အမကတော့ လုပ်ပြီ။ ပေးပြီးပြီလေ။ ၃ ပုဒ်။
ကေဇီ – အင်း။ ဟုတ်တယ်။ ကြည့် ကဗျာထဲ က အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေး အမ ပြခန်း အတွက် ကျန်ဖို့ အရေး ဟိုပြော ဒီ ပြော ပြောလိုက်ရတာ မောလိုက်တာကွယ်။
ရွှေကြည် – ဘာပဲ ပြောပြော ခု ကျန်တယ် ဟုတ်။
ကေဇီ – ဟီးဟီး။ ကျန်တယ်၊ ကျန်တယ်။ ပျော်စရာကြီး။ :harr:
နောက် တစ်ယောက်ကတော့ ဒီ ရွာထဲမှာ မမ်ဘာ ဝင်ထားပြီး ကဗျာကို လူကြိုက်မများဘူး ဆိုကာ ပို့(စ) မတင်ဖြစ်ပဲ ဖတ်ပဲ ဖတ်သူ ၁ ဦး။
မ နေခြည် ပါ…
ကေဇီ – အမ၊ ဒသန ကဗျာ တစ်ပုဒ်လောက် ပေးပါ။
နေခြည် – ဟင်။ ဆွိက နားလည်လို့လား။
ကေဇီ – (ဟိုက်! သေပြီ။) အဲ။. ဒီလိုလေ။ပြခန်းအတွက်ပါ အမရယ်။ ကူညီပါဦး။
နေခြည် – ဟိုတခါ အလက်ဆင်းကို ပေးထားသေးတယ်လေ။
ကေဇီ – အာ၊ အဲဒါနဲ့ မတူတဲ့ ဟာမျိုး လိုချင်တာ။
နေခြည် – အွန်း။ အွန်း။ ပို့ လိုက်မယ်။ ဆွိ ကြည့်ပြီး ကြိုက်ရာ ရွေးလိုက်တော့။
ကေဇီ – ဟုတ်။ (ခွိ။ ဟုတ်ပြီ)
နောက်ခါ အပြင် ကဗျာ ထဲက ဘယ်သူ့ကို အပူကပ်ရမတုန်း စဉ်းစားကြည့်တော့…….
ကိုကမ်းရဲ့ မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်သူ၊ ကိုယ်နဲ့ လည်း ရင်းနှီးတဲ့ မိဆု ကို သွားသတိရတယ်။
ကေဇီ – ချစ်ဆု ရေ၊ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လောက် ပေးသုံးပါ ကွယ်။
မိဆု – ရတယ် ချစ်ခိုင်၊ ရေးထားတာ အများကြီးပဲ ကြိုက်ရာ “မ” သွားချည် ။
အဟုတ်ပဲ။ ကြိုက်တာများ၍ ဘာ “မ” ရမှန်းတောင်မသိ။ နောက်မှ ရှိထားတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ တွဲလို့ ရမဲ့ ကဗျာလေး “မ” လာခဲ့ရတယ်။
နောက်တစ်ယောက်က သူ့ အတွေးလေးတွေကို ကြိုက်လို့ သူ့ စာတွေ လိုက်လိုက်ဖတ်ရတဲ့ ကလေးမ, မေယွန်းအိမ် တဲ့။
သူ့ကို တစ်ခါတည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးခိုင်းပြီး ကိုယ့် ကို ပေးခိုင်းရတယ်။
ဘယ်လို ရွေးရမလည်း လာပြန်မေးနေလို့ စိတ်ထဲ လောလောဆယ် ထိတဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ပေးပါ ပြောလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ယောက်က ဘလော့ကာ မိုးကုတ်သား ။
သူ့ နုတ်(ထ) တွေထဲ အရင် မွှေလိုက်ပြီးမှ ကြိုက်ရာတောင်းရတယ်။
ပြောမနိုင်တာ အစကတည်းကသိတာမို့ “သဘော၊ သဘော” တဲ့။ ဘေးမဲ့ ပေးသံကြီးနဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ပုဒ်တိုးပေါ့။
ဓာတ်ပုံကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် အင်တာနက်ထဲက မလိုချင်တော့ ဖဘအကောင့်ထဲက ဖတိုဂရပ်ဖာတွေကို ချဉ်းကပ်ရသေးတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရိုက်ကြတာဆိုတော့ ကိုယ်သုံးမဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာ ရေစာ ဖြုတ်စေလိုကြောင်း ဟိုလိုလေး ပြောလိုက် ဒီလိုလေးပြောလိုက်နဲ့ အောင်မြင်စွာကြိုက်ရာယူသုံးခွင့်ရပါတော့တယ်။
ကျန်တဲ့ ပုံတွေကတော့ ကဗျာရေးတဲ့ အစ်မ နေခြည် ဆီက သူ စုထားတဲ့ ပုံတွေ ဗလ အားကိုးပြီး တောင်းထားတာပါ။
စာရင်းလေး ချ ရေးလိုက်၊
ဓာတ်ပုံလည်းရွေးလိုက် လုပ်နေရင်း အလက်ဆင်းက တစ်ရက် ဖုန်းဆက်ပါတယ်။
အလင်းဆက် – မမခိုင်၊ လေး ခင်ခ က ရာသီစာလေး ပို့လိုက်မတဲ့။
ကေဇီ – ဟယ်။ ဟုတ်လား။ ခု မိုးတွင်းဆိုတော့ အင်ဥချက်လား၊ မျှစ်ချဉ်ဟင်း လား။
အလင်းဆက် – ဗျာ။ မမခိုင်၊ အစားချည်း စဉ်းစားမနေနဲ့လေ။ ကဗျာကို ပြောတာ။ ရာသီစာ ကဗျာလေး ပို့လိုက်တာ။ ဒါကိုပြောတာ။
ကေဇီ – ဪ။ ဟီး။ မှားတဲ့ အခါလည်း မှားပေမပေါ့။ အေးပါ။ ပြခန်း (၃) အတွက် စာရင်းတို့လိုက်မယ်နော်။
ဒီလိုနဲ့ ကို ခင်ခ ကြီး ဆီက ကဗျာ တစ်ပုဒ်ရတယ်။
နောက် ကဗျာ တောင်းချင်တဲ့ ရွာသားကြီးတစ်ဦးရှိပါသေးတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ တွေ့တုန်းခဏ ကဗျာတောင်းတော့…….
ရွာသားကြီး – မဇာ၊ ကျနော်ကလည်း ကဗျာနဲ့ ဝေးလို့ပါဗျာ၊ တစ်ခြား အကူအညီပေးပါ့မယ်။
ကေဇီ – တခြား အကူအညီက ခုလည်း ပေးနေတာပဲလေ။ ကျနော်က ကဗျာလိုချင်တာ။ ပေးရင်ပေး။ မပေးရင် နာမည်တွေ ဖော်လိုက်မယ်။ လူသိမခံတဲ့ ကိစ္စတွေ ရှိတယ်ဟုတ်။ ဘလက်မေးလုပ်လိုက်မယ်။
ရွာသားကြီး – ဟာ ။ အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ မဇာရယ်။ ကြိုးစားရေးပေးပါ့မယ်။ ကလောင်နာမည်လေးသာ ပြောင်းပေးပါ။ ဈာန် ဆိုပြီး။
ခွိခွိ။ ဒီ တစ်ယောက်ကို ဤသို့ ဤနှယ် ချိန်းခြောက်ရယူခဲ့တော့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရပြီပေါ့.။။ ကလောင်နာမည် က ဈာန်တဲ့။
ကိုယ့် အတွေးနဲ့ ကိုယ် ပီတိ ဖြစ်နေချိန်မှာပဲ ……
သဂျား က “ဂျီးဒေါ်၊ လေး ဘလက်ချော က သူ့ကို မေးမယ် ဆိုလို့ မမေးခင် ကဗျာတစ်ပုဒ် လာပို့သွားတယ်”
ကေဇီ – ဟေ။ ဟုတ်လား။ ငါ ဈာန် ကို ဘလက်မေးလုပ်မယ် ဆိုတာ နားစွန်နားဖျား ကြား ပြီး လာပို့တာ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီ လူဂျီး နားမကောင်းလို့ အကုန် နားစွန်နားဖျား လိုက်ကြား နေတယ်ဆိုပဲ။ ကျန်း:::::::။ သူငယ်မ ကုသိုလ် ငါ့ ကုသိုလ်။ ကဗျာ တစ်ပုဒ် ရပြန်ပြီ။
ဤသို့ဖြင့် ကို ဘလက်ချောဆီမှ ကဗျာတစ်ပုဒ် စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ရပါတယ်။
လောဘတကြီး ကဗျာ စုဆောင်းနေတာ။ ကိုယ့် အလှည့်ကျ ၁၅ ပုဒ် မက ၁၆ ပုဒ် ဖြစ်ပြီ။
၁ရ ဇွန် ၁၃
အထက်ပါ အတိုင်း ……..
၄) ခြိမ်းခြောက် တောင်း
၇) နား အဟွာကျင့်
၈) မက်လုံးပေး စသည့်နည်းမျိုးစုံ ဖြင့် ရယူထားသော ကဗျာများဖြင့် ပြခန်း (၃) ကို ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကျေညာအပ်ပါတယ် ။
တစ်ယောက်တည်း ထင်ရာကျဲပြီးမှ သူတို့ကို ပြတာမို့ အမှားအယွင်း ရှိပါက ကျနော် တစ်ယောက်တည်း ရဲ့ အပြစ်သာဖြစ်ကြောင်းလည်း အသိပေးအပ်ပါတယ်ဗျာ။
ပြခန်းထဲမဝင်ခင် ပြခန်းစောင့် (ဟုတ်ပေါင်) ပြခန်း တာဝန်ခံ သဂျား ဆီ က လက်ဆင့်ကမ်း စာစောင်လေးတွေ ယူသွားစေချင်ပါတယ်။ အရင် ပြခန်းဖွင့်တုန်းက ဆက်ဖို့ ကျန်သွားတဲ့….
(ဆရာ မြဇင်ရဲ့ ခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ (မြန်မာကဗျာ) စာအုပ်မှာ ပါရှိတဲ့ မြဝတီပုံနှိပ်တိုက် အယ်ဒီတာချုပ်၏ အမှာစာကို ကိုးကားထားတဲ့ )
မြန်မာကဗျာ သမိုင်းကြောင်း အဆက်ကလေးကို အပျင်းကြီးပြီး မရွတ်ပြနိုင်တော့လို့ လက်ကမ်းစာစောင်အဖြစ်ပဲ ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ထိုခေတ် မြန်မာကဗျာဆရာများသည် အစဉ်အလာ တေးကဗျာများကို ဆက်လက်ဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၁၉၁၃ – ၁၉၁၄ ခု လောက်မှစ၍ နိုင်ငံချစ်စေတနာ၊ မေတ္တာ ကရုဏာ စေတနာတို့ကို နှိုးဆော်နိုင်သော သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ကဗျာများ ထင်ပေါ်လာကြပါသည်။ ထိုကဗျာတို့သည် အတိတ်ခေတ် မြန်မာ့သမိုင်း၌ လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးအတွက် မျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတို့၌ လည်းကောင်း အထူးအာရုံပြု ဖွဲ့ဆိုသော ကဗျာများဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အထက်ပါစေတနာတို့ကိုပင် ခိုင်မာကျယ်ပြန့်လာအောင် နှိုးဆော်နိုင်သော ခေတ်စမ်းကဗျာခေါ် ကဗျာများသည် ၁၉၂၈ ခုလောက်မှစ၍ ဆက်တိုက်ပေါ်လာကြပြန်သည်။ ထိုကဗျာများသည် မြန်မာ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံး အမူအရာတို့၌ လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရှိသက်မဲ့ သဘာဝတို့၌ လည်းကောင်း အထူးအာရုံပြု၍ အမြင်သစ်ဖြင့် နားလည်လွယ်အောင် ဖွဲ့ဆိုသော ကဗျာများဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုတွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ရာ မြန်မာစာပေသည် တစ်ရှိန်ထိုး တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်ကဗျာဆရာများသည် များသောအားဖြင့် ခေတ်စမ်းကဗျာများမှ အရှိန်ယူလျက် ရေးဖွဲ့ကြသည်။ ထိုကဗျာဆရာများသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဒဏ်ကို ခံခဲ့ရသဖြင့်လည်းကောင်း၊ နယ်ချဲ့အရင်းရှင်သာမက နယ်ချဲ့ဖက်ဆစ်များ၏ဒဏ်ကို ခံခဲ့ရသဖြင့်လည်းကောင်း၊ စစ်ကြိုခေတ် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတိုက်ပွဲများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသဖြင့်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးအမြင်အသိ၊ ပြည်ထောင်စု စည်းလုံးရေး အမြင်အသိ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအမြင်အသိ၊ လူတန်းစာအမြင်အသိတို့ ရှိလာသဖြင့်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအရာပိုမိုစုံလင်စွာ ဖွဲ့ဆိုလာ၍ သူတို့ခေတ် အတွေးအခေါ်များ၊ သူတို့ခေတ် ခံစားမှုအသိများကို တင်ပြနိုင်ရန် အားထုတ်လာကြသည်။
ဤကား မြန်မာကဗျာ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာပုံကို အကျဉ်းချုပ် လေ့လာတင်ပြချက်ဖြစ်သည်။
ခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ (မြန်မာကဗျာ) စာအုပ်တွင် ပါရှိသော မြဝတီပုံနှိပ်တိုက် အယ်ဒီတာချုပ်၏ အမှာစာမှ…..
ခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ (မြန်မာကဗျာ) စာအုပ်တွင် ကဗျာဆရာ (၄၂) ဦး၏ ကဗျာပေါင်း (၈၇) ပုဒ် ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့မှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်မှသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်အထိ ပေါ်ထွန်းခဲ့သော ကဗျာဆရာပေါင်းများစွာ၏ ကဗျာပေါင်းအမြောက်အများထဲမှ အချို့ကိုသာ ရွေးချယ်စုစည်းတင်ပြသော ကဗျာများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို ဦးဝင်းဖေ က အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ အစအဆုံး ပြန်ဆိုပါသည်။ ယင်းတို့အနက် အချို့ကို ဦးဝင်းဖေသည် အင်္ဂလိပ် လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ်သတင်းစာ (Working People’s Daily) နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော ရှေ့သို့ (Forward) စာစောင်တို့၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။
ခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ (မြန်မာကဗျာ) စာအုပ်တွင် ပါရှိသော မြဝတီပုံနှိပ်တိုက် အယ်ဒီတာချုပ်၏ အမှာစာမှ ကောက်နုတ်ချက်
ထိုကဗျာများကို အမှတ်တရအဖြစ် ကဗျာပြခန်းတွင် လစဉ် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြခန်းထဲ မဝင်ခင် နောက်တစ်ခု ပြောပါရစေဦး။
ပထမပြခန်းက ဗုဒ် အများဆုံးသူနဲ့ …..
ဒုတိယပြခန်းက ဗုဒ် အများဆုံးသူကို ကြေညာချင်သေးလို့ပါ။
ပထမပြခန်း ဗုဒ်အများဆုံးကဗျာက “မင်းကြောက်ရမှာ တစ်ခုပဲရှိတယ်” ဖြစ်ပြီး ရေးသူက “အလင်းဆက်” ပါ။
ဒုတိယပြခန်း ဗုဒ်အများဆုံးကဗျာက “ချစ်ခြင်းကဗျာ” ဖြစ်ပြီး ရေးသူက “ကိုရင်စည်သူ” ပါ။
ဒါတွေ က ပြခန်း (၂) က ကဗျာတွေနဲ့ ရေးသူတွေ တွဲပြီး အသိပေးထားတာပါ။
ပြခန်း (၂)မှာလည်း ဖော်ပြပြီးသားပါ။ ဒီမှာ ထပ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မှုန်ရီဝေဝေ မန္တလေး- ကိုပေါက်(မန္တလေး)
အငယ်အနှောင်းမြို့ – ကမ်းဝေး
အမျှ အမျှ- ရာမည
ရွှေသည်ငါနဲ့ မထိုက်လေပြီ – ခင်ခ
အိမ်လွမ်းသူ- BMTM Mdy
အဝေး…အဝေးကြီးပဲ – Nora
အရိပ်မဲ့ ခြေရာများ- ပိတောက်မိုး
ပြခန်း (၁) တုန်းက ဗုဒ် (၁၀၅) ခုမှာ အလင်းဆက်ကဗျာက ဗုဒ် (၁၅) ခုနဲ့ အများဆုံးအရေအတွက်ကို ရသွားတာဖြစ်ပြီး
ပြခန်း (၂) မှာ ဗုဒ် (၇၉) ခုမှာ ကိုရင်စည်သူ့ ကဗျာက ဗုဒ် (၂၆) ခုနဲ့ အများဆုံးအရေအတွက်ကို ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကြေငြာခ အဖြစ် ဗုဒ် အများဆုံးရသူနှစ်ဦးမှ တိုက်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာ။ (ရေ ခဲ ရေ)
ဖြောင်း::: ဖြောင်း::: ဖြောင်း:::
တတိယ အကြိမ် ဖွင့်လှစ်တဲ့ ကဗျာ ပြခန်းက ကြိုဆိုပါ၏။ ဒီ ပြခန်း (၃) က ကဗျာလေးတွေကိုလည်း ဗုဒ်ခဲ့ပေးပါဦးဗျ။
ကျနော့ ပြခန်း (၃) မှာတော့ ပြခန်း (၁)/(၂) ထက် ပိုဝင် ပြီး ဗုဒ် ပိုများချင်ပါတယ်နော်။ တဂျား နဲ့ အလက်ဆင်းကို နိုင်ချင်လို့ပါ။
သနားသော အားဖြင့် ဗုဒ်ပေးကြပါ။ ဟိဟိဟိ။
ကဗျာ ပြခန်း အမှတ် (၃)
အကြိုက်ဆုံး ကဗျာ (၃) ပုဒ် ကို ရွေးပြီး ဗုဒ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ကဗျာပြခန်းမှာ.. ကဗျာလေးများ..ပါဝင် ပြသ ချင်တယ်ဆိုရင်တော့…. alinsett.art@gmail.com ကို.ကဗျာလေးများ..ပေးပို့နိုင်ပါတယ်..လို ့။
ကျုပ်ရွာထဲမှာ ဒုတ်​မိး ကျန်​ခဲ့လို့ပြန်​ယူတာဗျ
ကျမ ဟာ ကိုု လူကြိုက်များကြတာကိုုးးးးးး
အချိန်ရရင်တော့ လာဗုုဒ် ပါဦးရယ်။ ဗုုဒ်တာ နည်းလိုု့ ကျုပ်ကိုု ပြောနေကြတယ်။
ကဗျာ က အလှည့်ကျ ပါမှာပါ။
ဖွဘုတ်မှ နောက်ဆုံး ဒဒင်းများ အရ …
ဒီနေရာမှာ ဗုတ်တာ နည်းလွန်းနေလို့မို့ ….
ပို့စ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ မမကေဇက် မှ ပလိုမိုးချင်း ပေး၍ ဗုတ်စေတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ……။
အိုက်ဒီ ပလိုမိုးချင်း ကတော့ …….
ကိုင်း .. ကိုင်း .. မဗုတ်ရသေးသူတွေ ညန်ညန်လာ ဗုတ်ကျနော် ….
တော်ကြာနေ ပလိုမိုးချင်း မမှီဘဲ နေအုံးမယ် ….။
(ကျုပ်ကတော့ ဗုတ်ပီးဒါးဆိုဒေါ့ ပလိုမိုးချင်း ရစေဖို့အတွက် နောက်အကောင့်တစ်ခုနဲ့ ဝင်လာဂဲ့မယ်)
ဘယ်လို ပရိုမိုးရှင်းရမလဲ ဆိုတော့ကာ……………………………………
ဂဇက် ရွာ နဲ ့အဆက်ပြတ် နေသူတွေ
ကဗျာ ပြခန်း ကြီး ထဲ အခု မှာ ရောက် လာ အားသူတွေ အတွက်
သတင်း တစ်ခု ချန် ခဲ့ပါ မယ်။
ကဗျာ ပြခန်း အတွက်
ကဗျာ များ ပေးပို ့လိုပါ က
ပေးပို ့နိုင်ပါတယ် ။
ရောက် ရှိလာတဲ့ ကဗျာ များကို
သေသေချာချာ သိမ်း ပြီး
ပြခန်း တွေ မှာ ထည့် သွင်း ပြ သ သွား ပါ မယ် လို ့
ဂဇက်နဲ့ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပရောက်နေတာ အတော်ကြာနေပြီ ..
အခုတော့ (၃) ပုဒ် ဗုတ်လိုက်ပြီ
ပြီးတော့ အများစုကြိုက်ကြတဲ့ “ကျမဟာ”…
ဝင်တာအရမ်းနောက်ကျသွားတာတော့ တွေ့ပုချိ ပါ…….
ဘယ်လောက်နောက်ကျနောက်ကျ မမေ့မလျော့ လာတာကို ကြည်ဆောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခုတော့ အဝင်ရခက်လွန်းလို့ နှောင်ဖွဲ့မှု လွတ်ကင်းခြင်း..
ဒါနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းပေးရင် နောက်နှစ်ပုဒ် ထပ်လာဗုဒ်ပါ့မယ်..
၃ ပုဒ် အထိ ဗုဒ်လို့ ရတယ်။
ပရိုမိုးရှင်း ကို မစောင့်ပါနဲ့။
Vote ဖို့ဝင်လာတာ..။ ဝင်ပြီးမှ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ရုံးဆင်းနေလို့ ညကျမှ ပြန်လာ Vote တော့မယ်လို့ လာပြောတာနော်..။
ဗုဒ်တဲ့သူတွေ အတွက် ပရိုမိုးရှင်းရှိတယ်နော်။
နော်လည်း ပရိုမိုးချင်းမယ်.. အခိ…
ပရိုမိုးရှင်း နည်းတော့ မတူစေနဲ့နော် လုံမလေးးး
ဗုဒ် အရေအတွက်ကို ….
သကြား..ကျား ယင်..အကျောင်း ပျံ ဘာ…
ဒါကလေး များ လာတာနဲ့တင်
ခေါ်လိုက်ကြတာ သေလုမျောပါး ပဲ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုတော့ နိုင်ပြီ။
တဂျားးး နာ့ ကို မဆူနဲ့တော့။
ဗုတ်ရမဲ့လစ်စ်ထဲမှာ ကဗျာတွေ အကုန်မပါဝူးဖစ်နေသလားလို့…….???
ဒီကလဲ နန်းမင်ဘာတေရဲ့ ပိုအမ်တေမှ ရွေးပီးဗုတ်ချင်နေတာ….ဖစ်ပုံ
မန်ဘာဒွေကြားရင် ငိုတော့မာပဲ ချွေအိရယ်။
မယ်ဆွိလက်ရာက ထုံးစံအတိုင်း သွက်လက်နေတော့
ကေဇီလေး အားရှိအောင် ဗုတ်ပေးခဲ့ပါပြီ။
အာတီဒုံ ကို ချစ်တယ်။
လေနုအေး အဲ့လိုအရာတွေ ထပ်တူကျနေတဲ့ ကမာ္ဘလောကကြီး၏ တခုသော မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအောက်တွင် သများတို့ လားလားတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် သွေးခွဲခံလိုက်ရသည်။
တမီး ကဂျာ ပြခန်းလေး
အေးဆေးနေတာ မကျိချင်ဒေါ့ဝူးရားးးး ကိုဂျီး ရဲစီ။
လားး လားး အကြောင်းတွေ လာမဖွနဲ့နော်။ စန်းစန်းတင့် အစ်ရှူးမို့။
BTW ပြခန်းအတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေးပါ။
ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ် အတိတ်ကစိတ်အနာရှိလို့ ကဗျာမရေးတော့ပေမည့်…
နှမတော်မယ်ဆွိ အားရှိအောင် (သူလား အားပြတ်မှာ) ကျောက်စ် ဖတ်နေပါပြီလို့….
ပြီးရင် ဗုတ်ပေးမယ်… စိတ်ချ
ဒါဒွေဂျောင့် ကျောက်ကို ချိ ရဒါ။
ဂယ်ဂျီးကို ရမ်းဂျီးကို ကျေးဇူး ကြီးကြီးတင်ပါ၏။
ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်ရသေးဒဲ့ အူးကျောက်ကို ဂလောက်တောင်..
ကျုပ်တို့များ နှစ်ခါပြန်ဖတ်ပီး အပီဗုဒ်လိုက်ရတာ….
ဇဂါးမစပ် ဒီကဗျာပို့စ်ကလူဝင်ဖို့ အော်နေလို့သာ…
ဟိုဘက်ပို့စ်တွေတော့ ဖတ်ရုုံဖတ်ရဲတာ ရယ်..
ဗုဒ်ရင်ကို ကျေးဇူး ၂ ဆတင်တယ်မှတ်လိုက်ပါ။
ဒီ အချိန် ဘယ်သူမှ ကဗျာမဖတ်ချင်လောက်ဘူးးးး
မလာဘူးဆိုတဲ့ သူတွေ လာကြပြီ။
ချစ်ရပါသော ရွာသူ ရွာသားများးးးးးးး <3 <3 <3
ဒါနဲ့ကို တဂျားကို နိုင်နေပြီ၊
အမတော် ဇီဇီ ရဲ့ ကဗျာပြခန်းကို
ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပြီး ဗုတ်သွားပါကြောင်း …
နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါရန် …… ေိေိ
တယ်ရီယာ ဒိုဘာမင် စသော ရှိတမျှ ခွေးလွှတ်ပါဒီ နမတော်လေးးးးး
ပြခန်းစောင့် ရီပလိုင်းက မြန်ချက် ကွယ်…။
တပုဒ်မှ မဗုတ်ဘူး လို့ လာပြောတာ..
ဒီ ရက်မှာ ဒါပဲ အားထုတ်ရတာကိုးးးး
မဗုဒ်လည်း ကော်မန့်မှာ မနိုင်သေးလို့
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆငိလို ဒွန့်ပြရင် ဗုတ်မယ်ဗျာ.
လူငယ်တွေ ပါဝင်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာပြခန်းထင်ထားတာထက်
ပိုမိုအောင်မြင်နေတာ တွေ့ရတဲ့အတွက်… ပြခန်း တာဝန်ရှိသူ
အမတော်ဂျီး ကဗျာဗို့စ်သလို့ ရဲရဲကြီး မျက်စိမှိတ်ပီးသာ ဝက်စ်ဒင်းပွဲကို
တိုင်ကပ်နာရီဖြုတ်ပီးး အမတော်ကြီး ပွဲမှာ ဝင်ဗို့စ်ပေးဖို့ အာမခံပါတယ်…
တစ်ခုမကျန် ရီပလိုင်း ပျံနေဘာဒဒဲ့ မအဝှာ …
ဒီမန့်ဘာ ပါရင် မှီဖို့ (၆) ခု လိုနေသေးသဗျာ ….
(ကြားထဲ ဝင်သွားရင်ဒေါ့လည်း သိဝူးပေါ့)
ကျိုးစားထား …. အဟွတ် ..
ပြန်စာ တစ်လုံးကို တစ်ကော်မန့်ပြန်လိုက်ရမားးးးး
ဒါမှမှုတ် နောက်ဆုံး ၂ ရက်ကို ဟို ပရိုးမိုးရှင်းလုပ်လိုက်ရင် ပြခန်းပျက်သွားမားးးးး
ကျမဟာ… ရယ်၊ နှောင်ဖွဲ့မှုရယ်…၊ ဝေဒနာဆွေးချိန်ရယ်ကို Vote ထားကြောင်း ပြောဖို့ကို ခုမှပြောရတယ်..။
ကျမဟာ ကတော့ ကျမဟာမလို့ပေါ့နော်..။ နှောင်ဖွဲ့မှုကတော့ အတွေးလေးကို ကြိုက်လို့ အထူးသဖြင့် ကဗျာကို ဘောင်ခတ်မကြည့်ချင်တဲ့ အတွေးချင်းတူလို့…။ ဝေဒနာဆွေးချိန်ကတော့ စကားလုံးအသုံးနဲ့ ကဗျာနောက်ခံသရုပ်ဖော်ပုံ အချိတ်အဆက်မိနေတာ သဘောကျလို့..။
အဲဒါတွေကြောင့် အဲဒီကဗျာတွေကို Vote လိုက်ရပါတယ်လို့ ပြောတာ..။ ကြိုက်တာကတော့ အကုန်ကြိုက်..။
“ကျမဟာ” ကိုပဲ ကြိုက်တယ် .. အဲ .. ဟုတ်ဘူး .. ဗုတ်လိုက်တယ်လို့ …
အိုက်ဒါ .. အိုက်ဒါ … ဂျစ်နွန်းနို့ စစ်ကူလာပေးဒါ ..
တူညားလို ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်လဲ ပါဝူးးးး
ဟွန့်။ နောက်ဆုံး ဗုဒ်ပိတ်ချိန်မှ ပေါ်လာကြသေးတယ်နော်။
အဟွန့် ဒီပို့စ်မှာလာလာပြီး လေပေါတာ ဒါနဲ့ဆို ၅ခါရှိဘီကို..။ ;)
(အလင်းဆက်နှင့် အံစာတုံးအား နားရင်းအုပ်သံ )
ဒီကွန်မန့်နဲ့ ဆိုရင် စုစုပေါင်း တစ်ရာငါးဆယ့် ရှစ်ခု ဖြစ်သွားပြီမို့
နာတို့ကိုများ နာရင်း အုပ်တယ်ပေါ့လေ ။
နာ ရေခဲေတောင် ကြာပွင့် စားပြီး အစွမ်းတွေ ရှိလာမှ
နီ ့ကို သွေးကြွေး ဂလဲ့စား ချေမယ်
ဒီ ပို့(စ) ကြီး စတစ်ကီဖြုတ်ပေးပါတော့ဗျိုးးးးး